myanmar astrology lodge: 2010
၁၂ ရာသီဖွား ဗေဒင်ကော်လံ များ ဖတ်ရှူရာတွင် သတိပြုဖွယ်ရာ
ဗေဒင်ပညာဖြင့် မွေးနေ့ မွေးရက် မွေးလ မွေးနှစ် တွေကို ဟောပြောရာတွင် ၁၂ ရာသီ ပါဝင်ပြီးဟောဆိုမှူရှိကြသည်။၁၂ ရာသီဟောကိန်းများသည် ဂျာနယ်များ မဂ္ဂဇင်းများ တွင်မက FM Radio မှာပင်နေရာယူလာကြသည်။ ၁၂ ရာသီကိုဟောလျှင် အရှေ့တိုင်း နှင့် အနောက်တိုင်း ဟူရှ်ျ နှစ်မျိုးရှိသည်။ အနောက်တိုင်း ရာသီခွင် အစရက်နေသည် အင်္ဂလိပ်လ ၏ ၂၂ရက် ၂၃ ရက်တွင် စတင်လေ့ရှိပြီး၊ အရှေ့တိုင်း ရာသီခွင် အစပြုသောရက်တို့သည် အင်္ဂလိပ်လ ၁၅ ရက် ၁၆ရက်နေ့များတွင် အစပြုတတ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် တချို့ဆရာသမားများသည် အနောက်တိုင်းရာသီခွင်ယူပြီး အရှေ့တိုင်း ရာသီဇာတာများဟောသလို ဟောကိန်းထုတ်နေကြပါသည်။ ဥပမာ ...သောကြာ ဥစ်န၀င်း ရသည်။ကြာသပတေး ၀ဂ္ဂုတမ္မ န၀င်းရသည် ဟု ဟောကိန်းများတွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြသည် ကိုကြားသိနေရသည်။ သေမည် ရှင်မည်ဟော ခြင်းသည် အရေးမကြီးချေ ...Application ရောနှော ခြင်းသည် လက်မခံနိုင်သော ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။ဗေဒင်ကော်လံများဖြစ်ကြသော တရုတ်ရိုးရာ ၁၂ ကောင်
သင်္ချာဗေဒ ၊ ခုနှစ်နေ့သားသမီး အဟော များသည် Application မရှူတ်ထွေးချေ။ ၁၂ ရာသီ ဗေဒင်ကော်လံ ကိုတော့ သတိထား သင့်ကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။
ZODIACAL 12 SIGNS
Posted by soe naing win at Friday, August 27, 20100comments
Jupiter and the moon put onashow for Mother's Day - CSMonitor.com
Posted by soe naing win at Tuesday, May 11, 20100comments
ဒီနေရာမှာ အားပေးနိုင်ပါတယ်။ကျုပ်က အလကားကြော်ငြာနေတာပါ။
အနောက်တိုင်းဇာတာကတော့ မြန်မာတွေအသုံးနည်းကြပါတယ်။ဒီမှာကြော်ငြာထားတာတွေက အဟောတွေပါဝင်တဲ့ အရှေ့တိုင်းအနောက်တိုင်းဇာတာပရိုဂရမ်တွေပါ။ဆရာ မလိုဘဲဗေဒင်တွက်လို့ရသွားမယ်။အွန်လိုင်းကနေပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ်လိုက်ရင်သင့်အတွက် ဆရာရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
မြန်မာပြည်မှာက ရေးတဲ့လူကရောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ မှားဝယ်တတ်တယ်။တိုက်ရိုက်ပရိုဂရမ်မာနဲ့မတွေ့ရင် မကောင်းဘူး။ဗေဒင်ဆရာက ဆော့ဝဲနားမလည်တလို ပရိုဂရမ်မာကလည်းဗေဒင်မဟောတတ်တာရှိသေးတယ်။
Posted by soe naing win at Monday, March 22, 20100comments
Labels: astrology softwares
End of World 2012 နှင့် ကျုပ်နုပ်စုဆောင်းတင်ပြသမျှ
ဒီ 2012 ကမ္ဘာပျက်ကိန်း ဟာတော်တော်လေး ဂယက်ခတ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပြသွားတော့ပိုဆိုးလာတယ်။
“On December 21, 2012 The Winter Solstice, the Earth and the Galactic Center align. The Galactic Center is also called the Milky Way. The Mayans called the Milky Way, The Sacred Tree, or the Great Mother. This alignment of the Earth and the Galactic Center only happens once every 26,000 years! The Galactic Center is at approximately 26°-27° Sagittarius.”ဒီလို 2012 ဒီဇင်ဘာ 21 ရက်မှာ သူရဖ္ဖနေမင်းဟာ ဆောင်းတာဆုံ အမှတ် The Winter Solstice ကိုဖြတ်တာ နှစ်တိုင်းလိုလိုပါဘဲ ဂလက်ဆီ ဗဟိုကလည်း အဲဒီနေရာနားလေးဘဲ သာယန သူရဇ္ဖနေမင်းဟာ ဓနုရာသီ အံသာ၃၀ ကိုရောက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာ ဆောင်းတွင်းတာဆုံဝင်တဲ့ ကြန္နီ တောင် 23°ကျော် ကြန္နီဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုးတိမ်းဆောင်းတာလည်း 23 ကျော်ဘဲလေ။အခုဟေသီ နဲ့ ချီလီ ငလျှင်တွေကြောင့် ၀င်ရိုးအပေါ်ထိခိုက်တယ်။အချိန်နာရီထိခိုက်တယ်။ ဒီတော့ 2012 ကိုပိုလန့်လာကြတာပေါ့။
နောက်ပြသနာ က ......
ယူရေးနတ်နဲ့ ပလူတို မိဿ နဲ့ မကာရ စရရာသီတွေရဲ့ပတမတြင်းကနေ စကွဲယားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းပြသနာဘဲ။စရရာသီတွေဖြစ်တော့ နွေဦးတာဆုံနဲ့ဆောင်းတွင်းတာဆုံ စကွဲယား 90 ဒီကရီမြင်ကြတာပါ။ဒီ ဖေါ်ပြပါ ဒီကရီများဟာ မြန်မာ ဂြိုဟ်သွားတွေမဟုတ်ပါဘူး အနောက်တိုင်းကမ္ဘာသုံးဂြိုဟ်သွားသာယန tropical zodiacွပါ။မြန်မာနဲ့အိန္ဒယတို့က အရှေ့တိုင်းနိယာသနsiderial zodiac ကိုသုံးပါတယ်။ Mundame Astrology မှာ သာယနဘဲ သုံးရိုးထုံးစံရှိလို့ပါ။
“May 20th 2012 Annular Solar Eclipse at zero degrees Gemini. Central eclipse 23:53 GMT. Eclipse visible from southern USA, central America, central equatorial south America and Africa.”ဒါက 2012 မေလ 20 ရက်နေ့မှာ တပိုင်းတစ နေကြတ်မယ်လေ။အမေရိက အာဖရိကဒေသတွေမှာနေကြတ်တာမြင်ရမယ်။ မေထုန်ရာသီ အစ ဇီးရိုး ဒီကရီမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ မေထုန်ရာသီက အမေရိကပြည်ထောင်စုရဲ့ ဒိတ်စွဲရာသီလည်းဖြစ်နေတော့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။
ဗေဒင်မေးမြန်းသူတစ်ဦးနင့် 2012 အကြောင်းချက်တင်မှာပြောတာလေးထည့်ပေးလိုက်ပရစေ...
လေ့လာသူ: 2012...gabar phat mar hote ta lar hinß
movie mar top hote tal
လေ့လာသူ: baryee tar tone
Mr: i dun think so
yesterday i called my home and my mom told me about that
Mr: yess,,,this is very conplicated forecast abt 2010
လေ့လာသူ: and most of the fortuneteller are predicting that are to be true
Mr: ဒါက ချဲလို ကလင်ဒါကျ တခုပါ
လေ့လာသူ: but i heard somthing about it .there isareligion and they believe and said that year is the end of their clander
Mr: 2012 ကို ကလင်ဒါကျ လုပ်ထားပြီး အခြားကိစ္စတွေနဲ့ ဆက်စပ်ထားတာလေ
that Maya calendar end in 2012
လေ့လာသူ: aww..ma thi par bu,,but so interesting
so u hav also no idea about that ?
Mr: Maya was from south america culture
အဲဒီမာယာဒေသ မှာ ပိရစ်မစ် အသေးလေးတွေရှိတယ်
လေ့လာသူ: sound interesting
Mr: DVD မှာ မာယာ ဇတ်ကားတွေရှာကြည့်လို့ရတယ်
လေ့လာသူ: Apoklipto ..kar lar
spelling mightbwrong
Mr: ငါလည်း ဒီလောက်ဘဲသိတယ်
လေ့လာသူ: aww...dar so ma phit nai bu pot
လေ့လာသူ: barkyaunt 2012 gabar phat mel lo pyaw kya tar le.aedclander kyaut bae lar ..tachar akyaung kaw
exp...jo tway tite mhar doe bar doe pot
Mr: အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လေ
လေ့လာသူ:dmar tot bar mha ma pyaw kya par bu aedakyang nae pat tat p tot
Mr: အင်တာနက်ပေါ်မှာ 2012 လို ရှာကြည့်လိုက် ပြီးရင် အချက်အလက် ဒေတာများမများကြည့်လိုက်
Mr: search for 2012 gives 250,000,000 ဒေတာရှိတယ်
လေ့လာသူ: innn tway p
Mr: ယူနဲ့ချက်တာကို ဘလော့မှာတင်ပေးမယ်
Posted by soe naing win at Wednesday, March 10, 20102comments
ဟာသ ဗေဒင်ဆိုပေမဲ့ စရိုက်ကို ပီပြင်တယ်နော်
မေမေ "Aries သမီးလေး.. စကပ်ဝတ်ထားတဲ့အချိန် ဒါန်းမစီးရဘူးနော်။ ကောင်လေးတွေ
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ Ariesက မေမေဆီပြေးလာပြီး "မေမေ... မေမေ ဒီနေ့
Aries "သမီး ဒီလောက်မအပါဘူး မေမေရဲ့၊ အတွင်းခံကို သူမမြင်အောင် ချွတ်ထားပြီးမှ
ရေဆာနေတဲ့ Taurus " အတော်ပဲ... ကျွန်တော့်ကို မချိုတာပေးပါ"
virgoက ကိုယ့်ချက်ကိုကြည့်ပြီး "ဒါဘာလဲ"လို့ ဖေဖေကို တအံ့တသြမေးတယ်။
ဖေဖေက "ချက်ကြိုးက ကလေးငယ်ကို မိခင်နဲ့ဆက်ထားပေးတယ်။ မိခင်ဝမ်းတွင်းက ခွါတာနဲ့
ဆရာဝန်က ချက်ကြိုးကိုဖြတ်ပြီး အထုံးထုံးပေးလိုက်တယ်။ အဲလိုနဲ့
ချက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်" လို့ အတိုချုံးရှင်းပြလိုက်တယ်။
ဖေဖေ "Libra သား.. ဒီနေ့ကျောင်းမသွားနဲ့တော့၊ မနေ့ညက သားအတွက် သားမေမေက
အမွှာလေးမွေးပေးလိုက်တယ်။ ဆရာမဆီ ခွင့်တစ်ရက်တိုင်လိုက်နော်"
Libra "ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ... ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ပဲမွေးတယ်လို့ သားပြောမယ်။
ကျန်တစ်ယောက်ကို သားကျောင်းမသွားချင်တဲ့နေ့မှ ထပ်ပြောမယ်"
"ဟင်း.. ဒီည ငါအခန်းထဲ ဝင်မအိပ်တော့ဘူး။ အခန်းထဲမှာ မင်းကို အငတ်ထားပြီး
Sagittarius တအောင့်လောက် စဉ်းစားပြီး.....
"ဘိုးဘိုးဆံပင်တွေ တစ်ခေါင်းလုံးဖြူရတာက ဘာကြောင့်လဲဖေဖေ?"
ရုတ်တရက်မိုးရွာချတယ်။ မေမေက Capricorn လက်ကိုဆွဲပြီး "မိုးရွာပြီ...
ပြေးပြေး.. ရှေ့ကိုပြေး!" လို့ပြောတော့ Capricornက တုံ့နှေးနှေးနဲ့ "ရှေ့မှာ
Pisces "သနားလိုက်တာနော်။ ဖေဖေက စားစရာမရှိလို့ သားတို့အိမ်ကို
***၁၂ရာသီဖွားတွေမှာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေ ဒီထက်မကရှိကြပါတယ်။
အင်တာနက်မှာရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာရေးထားတာက တချို့တလေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂)ရာသီခွင်ဟာသလို့ ဆိုထားပေမယ့် တချို့က သိပ်မရယ်ရပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
Posted by soe naing win at Wednesday, February 24, 20100comments
Labels: ရာသီဖွား ဗေဒင်ဟာသ
ကြာသပတေးဂြိုဟ် မကာရ ရာသီ အားနည်းစွာရပ်တည်ရ်ျ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း စီးပွားရေးကျတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ဘဲလားလေဘာတီ
Voice Journal January 18-24-2010 issue
နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်ထုတ် ဂျာနယ် တစ်ဆောင်ရဲ့ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နာ မှာ " ကြာသပတေးဂြိုဟ်က မကာရ ရာသီမှာ အားနည်းစွာ ရပ်တည်နေခဲ့လို့ ကမ္ဘာ တလွား စီးပွားရေးကျ သွားပါတယ်လို့ ရေးသားထားပြီး ကုံရာသီကို ကောဇာ ကြာသပတေး ရောက်ရင် ဂြိုဟ်ဟာ နှစ်ဆ အမြန်နှုံးနဲ့ speed တင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့စီးပွားရေးပြန်တတ်လာမယ်" လို နက္ခတ်သုတေသီတစ်ဦးကရေးသားဖေါ်ပြတာတွေ့ရပါတယ်"ဆိုသည်ကို ဆရာ ဘဲလားလေဘာတီက အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ဝေဖန်ထားပါတယ်။
ဆရာ ဘဲလားလေဘာတီဧ။် မှတ်ချက်တွင် " ကြာသပတေးဂြိုဟ်နှစ်ဆမြန်သွားလို့ကမ္ဘာစီးပွားရေးတွေ ပြန်တတ်လာမယ်ဆိုတာကို ပြောဖို့မဆိုထားနဲ့ လူတယောက်ရဲ့ စီးပွားရေးအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ပြီး ပြန်ကျသွားရင်တောင် ကောင်းကင်မှာဘယ်လိုဂြိုဟ်တွေဘဲ ပြောင်းပြောင်း သူ့စီးပွားရေးက ချက်ချင်းပြန်တတ်လို့မရတော့ပါဘူး" ။
ဒီကြာသပတေး မကာရတွင်နစ်မူသော ပြသနာ သည် မီဒီယာထဲပါလာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် ကျု ဘလောက်တွင်တဆင့်ဖေါက်သည်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by soe naing win at Wednesday, January 27, 20100comments
Labels: မြန်မာ ဗေဒင်မီဒီယာ ကော်လံ
၁၂ ရာသီဖွား ဗေဒင်ကော်လံ များ ဖတ်ရှူရာတွင် သတိပြုဖွ...
Jupiter and the moon put onashow for Mother's Da...
End of World 2012 နှင့် ကျုပ်နုပ်စုဆောင်းတင်ပြသမျှ...
ကြာသပတေးဂြိုဟ် မကာရ ရာသီ အားနည်းစွာရပ်တည်ရ်ျ ကမ္ဘာ...